WiFi AC: ဒါကဘာလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကောင်းကျိုးများပေးသလဲ Androidsis
WiFi AC ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်အသုံးပြုရတာလဲ
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ WiFi AC အကြောင်းကြားဖူးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသသောအခါ၊ ဤဝေါဟာရကိုများသောအားဖြင့်ပြလေ့ရှိသည်။ သုံးစွဲသူများစွာသည်၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုအမှန်တကယ်မသိသေးသောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းနှင့်၎င်း၏အရေးပါမှုအကြောင်းသင့်အားပိုမိုပြောပြလိမ့်မည်။ ဒီတော့ဒီအယူအဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးသံသယမရှိပါဘူး။
ကျနော်တို့ပြီးသားကြောင်းမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ် WiFi AC သည် wireless network connection များတွင်ပေါ်ထွက်လာမည့်နောက်ဆုံးပေါ်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်နိမ့်သောမြန်နှုန်းကိုကတိပေးသည်၊ မြန်နှုန်းတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ.
1 WiFi AC ဆိုတာဘာလဲ။
2 Beamforming - ယင်း၏သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအတွက်သော့ချက်
WiFi AC ဆိုတာဘာလဲ။
ဝိုင်ဖိုင် AC သည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို IEEE Standards Association မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အကြားတီထွင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အကုန်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောစျေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိသောထုတ်ကုန်အများစုသည်၎င်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဖုန်းတွေမှာ၊ သင့်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များထဲမှာပြသဘယ်မှာ.
ဒီ WiFi AC ကို WiFi N ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတယ်၊ ဆိုလိုတာကအရင်မျိုးဆက်တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေထဲမှာပါနေတယ်။ ၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာမှာပိုမိုမြင့်မားသော connection speed ကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ဗားရှင်းများထက် MIMO စီးဆင်းမှုများစွာနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောမြင့်မားသောတီးဝိုင်းကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်။ စာရွက်ပေါ်တွင်၊ ကေဘယ်ကြိုးနှင့်အတူတူပင်မြန်နှုန်းကိုရောက်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမဟုတ်ဘဲပစ္စည်းနှစ်ခုအကြားကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသင့်သည်။
သော်လည်း WiFi AC သည်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောလက်ရှိ version မဟုတ်ပါ 802.11 standard (အစဉ်အလာကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများတွင်) ၏, ငါတို့ယနေ့အများဆုံးမကြာခဏတွေ့သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖုန်းများတွင်သာမက router သို့မဟုတ် adapters ကဲ့သို့သောအခြားကိရိယာများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အေဒီ၊ အေဒီ၊ အေ၊ အေ၊ အေအက်၊ အေအက်၊ အေနှင့်အေယစသည့်ဗားရှင်းအသစ်များဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသည်။
ယခင်ဗားရှင်းများနည်းတူ WiFi AC သည်5GHz bada ဆက်သွယ်မှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုနည်းပါးသည်၊ လိုင်းများနည်းပြီးဆက်သွယ်မှုနည်းသည်။ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ငါတို့ပြောနေတဲ့ဒီစံနှုန်းဟာ၊ ဒီ5GHz band အတွက်သီးသန့်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဤသည်သည်သင့်အားယခင်စံထက် ၁၂ ဆပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် 2,4 GHz band တွင်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
Beamforming - ယင်း၏သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအတွက်သော့ချက်
ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကွီးမားသောသော့တစျခုမှာ Beamforming ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိရိယာများအားအချက်ပြခြင်း၏တိုးချဲ့မှုကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည့်အချက်ပြသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အဆင်ပြေသောနေရာတွင်လက်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးမလိုအပ်သောလမ်းကြောင်းတွင်လျှော့ချနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ router ဖြစ်သည် ၎င်းသည်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော devices များ၏ညှနျကွားမှုအတွက်ပိုမိုပြင်းထန်သောလှိုင်းများကိုထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်.
ဒီနည်းစနစ်ကိုအရင်ဗားရှင်းတွေမှာတွေ့နိုင်ပြီးဖြစ်ပေမယ့် WiFi AC နဲ့အတူသူ့ရဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုသိသိသာသာတိုးတက်လာတယ်။ တိုးတက်တော်မူပြီးမှအပြင် ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး သာ။ ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်နှင့်အတူ၎င်း၏လိုက်ဖက်တဲ့။ ဤနည်းအားဖြင့် WiFi အချက်ပြသည်အရေးကြီးသည့်နေရာများတွင် ဦး စားပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားသောမြန်နှုန်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအချက်ပြမှုကိုရရှိသည်။
WiFi AC နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးမှာ Beamforming မပါဘူး။ ၎င်းသည်သင်၌ရှိသော router ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်လက်ရှိမော်ဒယ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည်၎င်းတွင်ရှိ / မရှိအမြဲပြသသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်တော့မည်ဆိုပါကသတိရရမည့်အရာဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုကွောငျ့, WiFi AC သည်လတ်တလောမြန်ဆန်သောဆက်သွယ်မှုစံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်, သောအချို့ကိစ္စများတွင် cable ကိုကိုက်ညီရန်စီမံခန့်ခွဲ။ ထို့အပြင်၎င်းကိုရရှိနိုင်မှုသည်ကျယ်ပြန့်သည်။ အန်းဒရွိုက်၊ ကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ် router များအပါအ ၀ င်လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်၊ အကောင်းဆုံးသောဆက်သွယ်မှုကိုရရှိရန်ဒီနည်းပညာနဲ့သဟဇာတမဖြစ်ကိုရှာဖွေရတာကောင်းပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » WiFi AC ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်အသုံးပြုရတာလဲ